RASMI: Man City oo laga dul qaaday ganaaxii laga saaray ka qaybgalka Koobka Horyaallada Yurub | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha RASMI: Man City oo laga dul qaaday ganaaxii laga saaray ka qaybgalka...
RASMI: Man City oo laga dul qaaday ganaaxii laga saaray ka qaybgalka Koobka Horyaallada Yurub
(Nyon) 13 Luulyo 2020 – Manchester City ayaa ku guulaysatey rafcaankii ay ka qaadatay go’aankii 2 sanadood looga mamnuucay Koobka Champions kaddib markii uu soo baxay go’aanka Maxkamadda Ciyaaraha ee CAS.
CAS ayaa aqbashaday rafcaanka ay City ka qaadatay mamnuucidda UEFA, balse waxay kusoo rogtey 10 milyan oo euro ($11.3 milyan oo doollar) oo ganaax ah maadaama ay ku guuldarraysatay la shaqaynta dadkii kiiska baarayey.
Go’aankan oo ay gaareen 3 garsoore, ayaa kooxda Pep Guardiola u saamaxaya inay Champions League kasoo geleeyso heerka guruubyada fasal-ciyaareedka soo aaddan, iyadoo aan la taabanayn booska ay City uga jirto midka dib u bilaabmaya bisha soo aaddan.
Go’aankan ayaa City ka caawinaya inaysan waynin malaayiin lacag ah oo ay ku heleeyso ka qayb galka Champions League iyo inaysan laacibiintu ka kala cararin, waloow uu Guardiola horay u sheegay inuu sii joogayo “wax kastoo dhaca.”
UEFA ayaa Man City xukunkan ku riddey bishii Febraayo kaddib markii lagu helay inay “si xun ugu tumatay” xeerka dhaqaale wanaagga FFP oo ay xisaabo badan qaab marin habaabin ah usoo gudbiyeen.
Waxaa sidan oo kale UEFA maxkamadda CAS uga adkaatay AC Milan, waloow ay sanadkan bilowgiisii xeer jajab kula gaartey inay sanad ka maqnaato koobabka Yurub, balse la tuuro eedaha loo haysto ee FFP la xiriira.
Arrintan ayaa dili doonta micnihii FFP, iyadoo ay kooxo badani ka dhaqaaqi la’yihiin, halka kooxaha qaarkood aysan u joojin.
Previous articleWasiir ka tirsan DF Somalia oo sheegay hadal ISTARAATIJIYAD ahaan khalad ah (Sharraxaad looga baahan yahay)
Next articleQaban qaabada aas qaran oo loo sameeynayo Xasan Abshir Faarax oo ka socota Xafiiska RW Khayrre + Sawirro (Calanka oo hoos loo dhigayo)